Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Dadka » Lotte Hotels & Resorts Magacyada Maamulaha cusub ee Ameerika
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Jim Petrus waxaa loo magacaabay Maamulaha Guud ee Lotte Hotels & Resorts America
Lotte waxay qorsheyneysaa inay furto in ka badan 20 huteel 5-ta sano ee soo socota, iyadoo beegsaneysa magaalooyinka muhiimka ah ee laga soo galo, xarumaha tikniyoolajiyadda iyo meelaha loo dalxiis tago ee Ameerika.
Jim Petrus waa 30 sano lagu daray hogaamiye warshadeed oo door sare ka soo qabtay Blackstone / BRE Hotels iyo Resorts, Starwood Hotels iyo Resorts iyo Hyatt Hotels.
Lotte hadda waxay leedahay 34 hanti oo wadartoodu tahay 11,200 qol oo leh 3 guri oo dheeri ah oo ku jira dhuumaha.
Magacaabista Petrus waxay ku dhisan tahay sida qaaliga ah ee Kuuriyada Koofureed ay uga go'an tahay inay u abuurto khibrado gaar ah oo soo jiidasho leh martida ku nool Ameerika.
Shirkadda Lotte Hotels Jim Petrus ayaa maanta ku dhawaaqay in loo magacaabay Madaxa Sare ee Fulinta Hoteelada Lotte Hoteelada iyo Dalxiisyada Ameerika, isla markaaba laga bilaabo. Petrus waa hogaamiye warshadeed 30 sano jir ah oo door sare ka soo qabtay Blackstone / BRE Hotels iyo Resorts, Starwood Hotels iyo Resorts iyo Hyatt Hotels. Magacaabista Petrus waxay ku dhisan tahay sida qaaliga ah ee Kuuriyada Koofureed ay uga go'an tahay inay u abuurto khibrado gaar ah oo soo jiidasho leh martida ku nool Ameerika.
Hoteelada Lotte & Resorts waxay soo gashay suuqa Waqooyiga Ameerika sanadki 2015 iyadoo lawareegtay huteelka caanka ah ee Manhattan ee Lotte New York Palace huteel waxayna sii ballaadhisay raadkeeda sanadka 2020 iyadoo la furay Lotte Hotel Seattle. Lotte waxay qorsheyneysaa inay furto in ka badan 20 huteel 5-ta sano ee soo socota, iyadoo beegsaneysa magaalooyinka muhiimka ah ee laga soo galo, xarumaha farsamada iyo meelaha loo dalxiis tago ee ku yaal Ameerika. Lotte hadda waxay leedahay 34 hanti oo wadartoodu tahay 11,200 qol oo leh 3 guri oo dheeri ah oo ku jira dhuumaha. Shirkadaha Lotte Hotel waxaa ka mid ah Signiel, oo ah sumadooda 6-xiddigood; L7, magacooda qaab nololeed; iyo Lotte Hotels, summadooda saxiixa.
Inta lagu gudajiray xirfadiisii ​​sharafta laheyd ee Petrus, wuxuu udub dhexaad u ahaa dhisida dhaqanka iyo istiraatiijiyad ganacsi ee ugu wanaagsan dhamaan magacyada uu taabtay. Waxaan si aad ah ugu rajo weynahay dhamaan waxa uu Jim u fidinayo Lotte Hotels & Resorts waana ku faraxsanahay inaan u horseedno jiilka soo socda ee guusha u leh astaanta Mareykanka, ayuu yiri Mudane David Kim, Lotte Hotel Corporation President and CEO. Wuxuu fahamsan yahay ganacsigeenna, shirkadeena iyo dadkeenna, waxaanan ku kalsoonahay inuu yahay hoggaamiyaha saxda ah ee dhaqankeenna iyo ganacsigeenna horay u marinaya.
Kahor inta uusan ku biirin Lotte Hotels & Resorts, Petrus wuxuu lajiray Blackstone / BRE Hotels and Resorts halkaas oo uu ka ahaa Madaxweyne kuxigeenka Sare ee Maareynta Hantida- Hawaii Hoteelada iyo Dalxiisyada. Petrus waxay sidoo kale dhowr door muhiim ah la qaadatay Starwood Hotels iyo Resorts gudaha magaca St. Regis oo ay ku jiraan Hogaamiyaha Calaamadda Caalamiga ah iyo Madaxweyne Ku Xigeenka Hawlaha. Ka hor, wuxuu qabtay dhowr jagooyin heer sare ah Hyatt Hotels. Intii uu ku guda jiray xirfadiisa, Petrus wuxuu kaloo qabtay doorar badan oo hogaaminta madaniga iyo warshadaha ah. Petrus wuxuu ka qalin jabiyay dugsiga hoteelka ee Jaamacadda Michigan State.
“Sharaf ayay ii tahay in la i siiyo fursad aan kula wareego hogaanka Lotte Hotels & Resorts ee Ameerika,” ayuu yidhi Mr. Petrus. “Waxaan u arkaa wax badan oo ka mid ah noocyadayada Hotel-ka Lotte, waana ku faraxsanahay inaan fursad u helay inaan ku baraarujiyo noocyadan suuqyada safarka ee raaxada iyo qaab nololeedka ee geeskan adduunka. Taageerada kooxdeena gaarka ah ee Kuuriya, waxaan ku kalsoonahay inaan horumarin doono istiraatiijiyadda ballaarinta ee aan hadda heysano, iyadoo sidoo kale la dhisayo dhaqan soo dhaweyn aan caadi aheyn oo la siinayo fursado koror cusub xubnaha kooxda, martida iyo maalgashadayaasha. ”